FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiValencian IsiXhosa IsiZulu
EWallkill, eNew York: Esi sakhiwo sihlala amaNgqina angaphezu kwe-1 600 yaye kulapho kuprintwa khona iincwadi zawo eUnited States. Ukuze kwenziwe umsebenzi ongakumbi eWallkill, abakhi—abaninzi kubo basebenza ngokuzithandela—bakha iofisi enemigangatho emithathu, indawo yokupaka iimoto kunye nesakhiwo sokuhlala esinemigangatho emithathu. Ngo-2012, aba basebenzi bebesele begqibile ukwakha indawo yokugcina izinto zobuchwephetsha nokwandisa indawo yokutyela eza kuhlala abantu abayi-200.
AmaNgqina kaYehova anezakhiwo ezikhulu ekwalathiswa kuzo umsebenzi, ezibizwa ngokuba ziiofisi zamasebe kumazwe amaninzi afana neBrazil, iJamani neMexico. EUnited States, amaNgqina kaYehova analo neziko lokufundisa elisePatterson, eNew York, kunye neeofisi eziseBrooklyn. Xa kugqityiwe ukwandisa izakhiwo, iWallkill iza kuba sesona sakhiwo sikhulu esisetyenziswa ngamaNgqina kaYehova ehlabathini lonke.
EWarwick, eNew York: Esi sakhiwo sikhulu siza kuba likomkhulu elitsha lamaNgqina kaYehova. Izakhiwo ebezikho nebezingenabantu zidiliziwe. AmaNgqina afumene isiza eTuxedo, eNew York, ekumgama oziikhilomitha eziyi-10, apho aza kugcina khona oomatshini nezinto zokwakha. Abasemagunyeni baye bayamkela indlela engazukonakalisa nto aza kwakha ngayo amaNgqina. Xa iye yamkelwa iplani yesi sakhiwo, kuya kucelwa imvume yokwakha. Okwangoku, ikomkhulu lehlabathi lamaNgqina kaYehova liseseBrooklyn, eNew York.
Iifoto Zokuqala ZaseWallkill (Ukususela NgoJulayi 2013 Ukuya Kutsho Ngo-Oktobha 2014)